Inter Milan oo si deg deg ah kaga jawaabtay dalab ku kacayay lacag tiro badan iyo ciyaaryahan oo ay Chelsea ka gudbisay Romelu Lukaku – Gool FM
(Milan) 03 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa dalab qiimo badan ka heshay dhiggeeda Chelsea kaasoo lagu doonayay saxiixa laacibka weerarka ka ciyaara ee Romelu Lukaku.
Naadiga The Blues ayaa si aad ah u baadi goobeysa weeraryahan gool dhaliye ah, waxayna haatan baacsaneysaa xiddigeedii hore ee Lukaku oo ay dalab rasmi ah ka gudbisay kaddib markii ay ku hungowday saxiixa laacibka Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Yabooha ay Chelsea u bandhigtay Inter ayaa lagu sheegay inuu ka koobnaa 88 milyan oo gini iyo Marcos Alonso oo heshiiska qayb ka ah sidoo kalena u wareegaya dhanka Serie A, hase ahaatee, Nerazzuri ayaa iska soo diidday dalabkaas.
Kooxda magaalada Milan ka dhisan ayaa u sheegtay naadiga uu Macallin Thomas Tuchel hoggaamiyo in 28-jirka reer Belgium uusan iib ahayn maadaama uu udub dhexaad ahaa ku guuleysigoodii horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Lukaku oo 24 gool ka dhaliyay horyaalka Taliyaaniga ayaa Chelsea ka tirsanaa intii u dhexeysay 2011 illaa 2014 markaas oo uu Everton u dhaqaaqay, waxaana intaas dheer inuu iska diiday ku laabashada garoonka Stamford Bridge saddex sano kaddib isagoona xilligaas doortay ku biirista Manchester United.
Warbaahinta Faransiiska oo sheegtay halka uu Kylian Mbappe ka ciyaari doono fasalka soo aaddan... (Miyuu u dhaqaaqayaa Madrid?)